Aluka Armored "Nonna"
Weave "Nonna" wenziwa ngesisekelo ubuchwepheshe udibi abagqoke, ezahlukene ukuqina ekhethekile umonakalo lokukhanda. Ngokuya nokwethenjelwa, akusiyo eliphansi kuya "Diamonds" (ukushintshashintsha besilisa), kodwa kubonakala nenhle kakhulu futhi kulula, ngakho abesifazane ngokuvamile khetha ke.
Ubuchwepheshe lethiwa ngenxa yokufana nge chain mail. Imihlobiso wenza ngesisekelo le indlela, ungabahlukanisa izici ezimbili:
Emaceleni wokucwebezelisa amayunithi, enika umkhiqizo i isicwebezelisi ezengeziwe;
izakhi yasibamba wenziwa indiza olulodwa, ukuhlinzeka ukumelana tensioning, futhi ukukhuhlwa yizigqoko, namahlombe.
Lolu hlobo uxhumano amayunithi ayihlanganisi ukwelukwa flat, kodwa futhi ngakuthathu, okuyilona elisebenzayo futhi edumile ngoba amandla aso. Ubuchwepheshe tank ikuvumela ukwakha umhlobiso omuhle omkhulu Ingaphandle, ngakho ngokuvamile isetshenziswa imikhiqizo zabesilisa.
Lokhu uba nenhle kakhulu, ngokungafani izinhlobo eziningi aluka armored, ngakho ukukhiqizwa yayo enchanted engxenyeni zesifazane sabantu. Uma balindzeleke kwekutsi bakhicite amaketanga owesilisa noma namasongo ubuciko, ukujiya kanye ukuma usebenze amayunithi, okwenza emincane yabo futhi omkhulu. Ukuze akhanye ezengeziwe umhlobiso ebusweni isetshenziswa ebusweni idayimane nabo okukhanya okukhulu.
Lokhu ukwelukwa ngezinye izikhathi ngokungadingekile kudidaniswe "Figaro" ngenxa interleaving amayunithi ezihlukile. Ngokubukeka, kakulalutho ezivamile, njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala, izici ku nomunye bese bakha stud double, kuyilapho omunye olulodwa lwento ephilayo.
Hand futhi umshini ukunitha
embonini ubucwebe ubuchwepheshe wangenela kude phambili, ngakho kudalwa isixhumanisi imigexo lula kakhulu. Manje Chain "Nonna" Kwenziwa ngesandla noma ngomshini.
Inketho lapho uqala ukubona sitholakala sazikhohlwa, kuphela lapho kufuneka khona amayunithi okukhulu ngaphezulu njengoba izakhi automaton kokuzalela ivumela ukuthola ayibi ngaphezu kuka-0.2 mm obukhulu. Ngakho, umshini ilungele womshini ukwelukwa zabesifazane okudinga Finesse nenhlonipho ku- lemigqa.
Kodwa nakuba isikhona fragility okusobala umhlobiso, kuba noma kunjalo azigcina amandla ayo, okuyinto ebaluleke for bafake njalo.
Njengoba kushiwo ngaphambili, manje, "Nona" libhekisela imigexo unisex, kodwa abamele ubulili namandla akuvamile ukuwathenga. Ziyakwazi ngisondelene kakhudlwana uchungechunge zabesilisa, kule nqubo ye "Diamond", njengoba imikhiqizo enjalo kukhona okukhulu kakhulu futhi esiyinkinga.
i aluka okunjalo nenhle, yebo, ongeza nsizwa, kodwa inguqulo manual, ukushuba eyeqa ukunitha umshini. Kodwa qinisekisa ukuthi amantombazane akudingekile. Weave "Nonna" liyohlala umuntu, kungakhathaliseki ukuthi umkhiqizo onjani owenziwa kule nqubo.
Nokho, akunjalo kudala, kwakukhona ukushintshashintsha kuhlanganiswe kokuhlanganisa "Figaro" futhi "inethiwekhi kagogo." Nakuba kungakacaci kahle kuphela umshini, ngakho iketango ukudayisa kahle mncane. Ngaphezu kwalokho, le mikhiqizo mancane eqinile ngoba ukufakwa olulodwa round izixhumanisi kwephula kancane kokuqala isakhiwo ukwaluka. Imihlobiso ukuthi zisekelwe lobu buchwepheshe yiba nombono engenabuntu, ngakho-ke kufanelekile kokubili amadoda nabesifazane.
Igolide noma isiliva
imikhiqizo Chain "Nonna" ikhiqizwa zensimbi eziyigugu, singaqhubeka nje ukhethe Vending. Kodwa abanye abantu ababukeka kungahlali uhlobo igolide noma isiliva, Ngakho-ke, kuyinto ukuqonda leli phuzu kabanzi.
I metal ophuzi is kahle ukuhanjwa abantu abanesikhumba amnyama, izinwele ukukhanya emehlweni. Ngeke ukugcizelela imininingwane yangaphandle, kodwa ngokulinganisela, hhayi ukugxila into ethize. Ngaphezu kwalokho, kukhona umbono wokuthi ukwaluka kwakhe igolide "Nonna" (noma omunye umkhiqizo kulokhu kwaziswa) uye ephulukisa imiphumela: normalizes esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kanye uhlelo zemisipha, kanye nje esikhuthazayo nge melancholy nokukhathala.
Isiliva kuphambene kwensimbi ophuzi. It ihlobisa abantu abanesikhumba Uphaphathekile, izinwele ezimnyama futhi empunga ezihloniphekayo, egcizelela nombala omuhle. Ikakhulukazi kunenzuzo phezu isizinda esiliva ukudlala ithoni abandayo, ngakho-ke futhi abanikazi efanelekayo umlotha-ezimhlophe Shag noma steel blonde.
Ngo impahla yayo isiliva ukwaluka "Nonna" ihluke kakhulu kwethi igolide. Lokhu metal Sekuyisikhathi eside kwaziwa for imiphumela yayo omuhle emzimbeni womuntu, ngakho aphume sisaqhubeka ukukhiqiza iziphandla. Phakathi kwezinye izinto, isiliva kuletha ezolile, aqede neurosis kanye nokunciphisa uhlobo.
Yiqiniso, akudingekile ukusebenzisa ucezu ozithandayo ubucwebe ukuze uthole ukuhlukana ngokwakho kusuka kahle, kungenjalo ngokushesha kakhulu impahla yayo nenzuzo ayohluleka noma uzothathela umnikazi womkhiqizo.
Okufanele uthanda, wonke umuntu ekhetha bebodwa. Uma umuntu uthambekele kakhulu metal ethile echazwe kulesi sigaba weluleka ukuba singaba usizo kabi. Into kuphela okufanele zicatshangelwe, - umuzwa Ingxenye, ngoba ngisho umhlobiso enjalo elula, efana neketanga, "Nona", ezandleni abangenamakhono kungonakalisa isithombe.
Abaningi basakholelwa ukuthi nokweluka ka "Nonna" lethiwa behlonipha owesifazane othile, ngoba izimo ezinjalo akukhona okungavamile ukuba likhithike. Eqinisweni, "Nonna" - lena kuphela isifinyezo esilungele ibinzana Italian okuyinto uhumusha njengoba "ukwelukwa kagogo." Nokho, yini ebangela isihloko ethokomele enjalo kuze kube manje kunzima ukuqagela, t. Ukuze. Ukukhuluma lokhu liye lalondolozwa.
Top imigexo brand. Ubucwebe brand zomhlaba
Ingabe ikhona 925 igolide
Ukuhlanza ubucwebe esiliva ekhaya: izindlela eziphumelelayo ikakhulukazi namasu
Umhlaba idayimane emakethe
Indlela ukuhlanza chain isiliva noma indandatho ozithandayo?
World of Tanks - intuthuko game ukuthuthukiswa yasekhaya. Indlela ukulanda World of Tanks?
Usuku Lwamazwe Ngamazwe ulimi lwesiNgisi
Basketball umlando: kusukela lasendulo kwaba sezikhathini zanamuhla
I-Sofas ene-ottoman ephakathi. I-soy angular ne-ottoman: ubukhulu, isithombe
Isidlo esihlwabusayo - inkukhu kuhhavini
Cosmopolitanism - wukuthi ezimbi?
Nomfazi oyedwa - kuyini?
Izimpawu umfutho ophansi wegazi zicacile futhi elula
T 95 - Tank Abacekeli: umlando, izithombe, ukulwa nokusetshenziswa